Qalabka kioskiska ee Netkiosk | kiosk software fududeeyay!
Netkiosk Imperi 2019 (Kiosk Kiosk)
Netkiosk 2019 (4 Ruqsadaha)
Netkiosk 2019 (Ruqyo dheeraad ah)
Lacag-bixinta ee Netkiosk
Shuruudaha iyo Shuruudaha Netkiosk
Ku soo DHAWOOW Netkiosk
Netkiosk ee Windows | Software Kiosk oo Xirfadle ah ayaa fudud!
debecsan | Koobaynta
Xakameynta iyo nabada maskaxda oo leh ikhtiyaarada isbadalka ee dabacsan.
debecsan | U adeegso meel kasta
Kiosk Software awood leh oo dabacsan oo loo isticmaali karo goob kasta.
Dhammaan kontaroolada ku jira guddi maamul oo fudud oo awood badan | Diyaarso qalabkaaga dukaannada daqiiqado gudahood.
Barnaamijka Netkiosk Kiosk Software
Barnaamijka kiimikada xirfadlayaasha ee meel kasta.
Netkiosk waa farsamoyaqaanno farsamo oo wax ku ool ah oo kaa caawiya inaad ku badbaadiso oo aad xirtid kombuyutarkaaga (kombiyuutarka) oo leh guddi maamul ee amniga. Waxaad rabtaa inaad hubiso in dadkaaga isticmaali karin awood u lahaanshaha ilo kale oo ka badan kuwa aad ogolaatay. Waxaad ku dari kartaa Netkiosk dadka isticmaala si aad ugu habboonaato baahiyahaaga. Isticmaalka Netkiosk ayaa kaa caawin kara inaad xakamayso amniga jirkaaga ee tuubadaada iyo shabakadaada oo waxaan ku siinayaa nabadgelyo maskaxeed oo dhan. By xakamaynta helitaanka boggaga internetka ee gaarka ah, wicitaanada iyo xitaa codsiyada waxaad ku nasan kartaa hubin in isticmaalaha ugu dambeeya aanu awoodin in uu galo meelaha xaddidan. Waxaad u baahan tahay oo keliya xirfadaha IT-ga ee lagu hubiyo Netkiosk. Netkiosk wuxuu ka shaqeeyaa dhammaan noocyada Windows. Waxaan si buuxda u dhisi karnaa Netkiosk si aad ugu habboonaato baahiyahaaga. Waxaan kaa caawinaynaa inaad hesho inta ugu badan ee Netkiosk adoo samaynaya wixii isbeddel ah ee lagama maarmaanka ah ee aad rabto inaad ka dhigto shaqada Netkiosk ee goobtaada.
Xakamaynta shaashadda kiimikada oo la dhisay kombuyuutarka oo xiran sifooyinka ku haboon goob kasta.
Sii fursad u hel hal ama ka badan bogag intarnetka ah oo ku jira habka kioskka.
Netkiosk Standard waa xal dhammeystiran software-ka.
Waxaad si deg deg ah u xireysaa oo aad u hubin kartaa qalabkaaga Windows.
Waxaad kuxaqiijin kartaa Nidaamka Netkiosk ah ee shabakad sifudud ah ama qaab shey kiimiko ah. Waxaad si sahlan u hagaajin kartaa galka shabakada ama qaabka kioskka macluumaadka iyadoo loo marayo habka fudud ee loo xakameeyo guddi maamul. Waxaad xiri kartaa shabakad gaar ah oo aad ku hubiso kombiyuutar laga bilaabo isticmaalka dadweynaha. Si fudud u daji cinwaanada URL ee la heli karo oo xaddidaya kuwa leh waxyaabo aan habboonayn. Waxaad dooran kartaa bogagga internetka ee uu isticmaaluhu ku heli karo iyada oo la adeegsanayo filter-ka-dhejinta liiska cad. Waxaad xitaa xayiri kartaa goobo ama ereyada muhiimka ah ee leh qalabka dhismaha ee gudaha. Waxaad si dhaqso leh u awoodi kartaa ama u xiri kartaa liiska maqaarka, badhannada iyo fursadaha isticmaalaha si aad ugu habboonaato baahiyahaaga. Isticmaalayaasha ma heli karaan barta internetka kale.
Qaababka Ku dar
Diiwaanka kioskada oo xiran.
Guddi amaan ah.
Waxay ku socotaa dusha sare ee Windows.
Diyaarso isticmaalka daqiiqadaha
Saacad wakhti aan dhamays tirnayn oo la beddeli karo.
Qalabka dhismaha ee la dhisay.
Barnaamijka kaligiis ah.
Shaashadda taabashada oo ku habboon.
Custom ama Windows OSK.
Ku rakib xaddiga 3.5 mb
Wuxuu ka shaqeeyaa dhammaan noocyada Windows.
Faahfaahin dheeraad ah. / Soo dejiso Tijaabada.
Netkiosk Imperi (Kiosk Kiosk)
Xayiraadda No.1 ee Google Chrome ee xayeysiiska.
Ku samee boggaaga interneetka shaashadda leh ee kumbuyuutarrada leh oo xiro PC.
On the 11th of November 2019 Netkiosk imperi waxaa lagu badali doonaa Netkiosk imperi 2020. Hoos ka daawo sawirada horudhaca.
Iyadoo Netkiosk Imperi ama Kiosk Kiosk aad si dhaqso ah u xiran kartaa kombuyuutarradaaga oo kumbuyuutarka Google Google ku kashifi karto habka loo yaqaan 'kiosk' dabacsan. Netkiosk Imperi waxaa si gaar ah loogu talagalay in ay kudhaqaajiso Google Chrome qaab shisheeye ah. Iyadoo la adeegsanayo guddi maamul ammaan ah waxaad xakameyn kartaa bogga ku-meel-gaadhka ah ee leh liistada-liistada liiska cad. Inkastoo Chrome leeyahay lahaansho habka kioskkani taasi uma oggola inaad meel dhigato ama aad xirto qalabkaaga daaqadahaaga. Nidaamka caadiga ah ee Netkiosk Imperi ayaa markii ugu horreysay lagu guuleystey doorashadii 2015 ee Isbanishka December. Iyadoo Netkiosk ay ku hareeraysan tahay 4000 Windows kumbuyuutar si ammaan ah ayaa loo adeegsaday Google Chrome. Qaar badan oo ka mid ah macaamiishayaga shirkadaheena waxay isticmaalaan Netkiosk inay helaan amniga dadweynaha ama shaqaalahooda PC. Laga bilaabo May Maajo 2019 Netkiosk Imperi ayaa weli ah xalka keliya ee software-ka ah ee loogu talagalay in lagu ordo Chrome-ka Google Chrome qaabka saafiga ah.
100% Habka kiimikada ee Chrome.
Xalka kioskiga ee loo yaqaan 'chrome Chrome'.
Xilliga kombuyuutarka degdega ah.
Xakamee helitaanka bogga 1.
Ku rakib xaddiga 10 mb
Dhammaan qoraalada Netkiosk. Hal sicir ah. Liisanka noocyada kala duwan. Liisanka Multi PC.
Netkiosk 2019 waxaa ku jira dhammaan noocyada Netkiosk ee hadda jira.
Iyadoo Netkiosk 2019 waxaad kaliya bixisaa ruqsad rasmi ah.
Waxaad heleysaa dhammaan noocyada Netkiosk ee hadda jira, waxaadna heleysaa liisan badan oo PC ah si aad u bilowdo.
Versions waxaa ka mid ah (oo ay ku jiraan barnaamijyada caawimaada bilaashka ah)
Faylka Faylka Netkiosk.
Macluumaad intaas ka badan / Soo iibso Hadda.
Qalabkayaga cusub ee loo yaqaan 'Chromium' ee kiosk ku shaqeeya ee xalka ah Kuu siinayaa xakameyn iyo dabacsanaan ugu badnaan.
Netkiosk imperi 2020. Qalabka Kiosk ee loo yaqaan 'Chromium Powered Kiosk'.
Netkiosk imperi 2020 waa astaankeena cusub ee qalabka kiosk chromium ee kiosk. Netkiosk imperi waxay u xoog badan tahay sida Google Chrome iyadoo faa iidada lagu daray karti u leh inaad maamusho biraawsarka biraawsarka ah ama biraawsarka mashiinka shaashadda oo dhan. Guddi maamul oo aamin ah ayaa kuu oggolaanaya inaad maamusho bogga bogga, liistada cad iyo shaandhaynta waxa ku jira iyo xannibaadda 'popupup Customer'. Netkiosk imperi sidoo kale waxay leedahay keyboard taabasho caadi ah oo lagu dhex dhisay.
Netkiosk imperi wuxuu ka shaqeeyaa dhamaan noocyada Windows.
Chromium awood badan
Tabbed / Display dukaansiyo biraawsar.
Liiska cad iyo inbadan…
Waa la heli karaa goor dhow
Netkiosk imperi 2020. Siideyn 11 Nov 2019.
Hordhac sawirada Netkiosk imperi 2020. Qalabka Kiosk ee loo yaqaan 'Chromium Powered Kiosk'.
Muuqaal horudhac (midig guji. Fur fur cusub)
Ku kalsoon yihiin dad badan tan 2011.
No1. Software Kiosk Software.
Maraykanka iyo qaybaha kale ee dawladda iyo sidoo kale hay'ado badan oo adduunka ah waxay ku kalsoon yihiin Netkiosk.
Qaar ka mid ah macaamiisha shirkadahaan ee dhowaan ka mid ah Porsche Leipzig, Daimler Germany, SMBC Bank Tokyo Tokyo Japan iyo Marks & Spencer stores ee UAE.
Daawooyinka Bayer. Ka shaqeynta Netkiosk dhowr warshado oo Aasiya ku yaal.
Doorashada Qaran ee Isbaanishka. 20th Diisembar 2015: Version Custom Netkiosk oo lagu rakibay qalabka 4000.
Doorashada Ontario Canada. 7th Juun 2018: Nooca gaarka ah ee Netkiosk oo lagu rakibay qalabka 25000.
Doorashooyinka Kanada saskching 2020. Xalka Netkiosk Custom.
Netkiosk wuxuu sidoo kale u shaqeeyaa kaliya 1 PC.
Eeg cidda isticmaaleysa Netkiosk.
Daimler (Mercedes-Benz), Porsche, Marks & Spencer UAE, SMBC Bank Japan iyo kuwo kaloo badan.
Software-ka Kiosk ayaa fududeeyey.
At Netkiosk waxaan ku takhasusay sofware. Macaamiishayada waxaa ka mid ah Waaxda Dawlada, Shirkadaha, Waxbarashada iyo ururada kale, waaweyn iyo kuwo yaryar. Netkiosk waxaa la aasaasay 2011 iyada oo ujeedadu tahay in la bixiyo barnaamijyo lagu kalsoonaan karo oo la isku halayn karo oo la awoodi karo. Falsafadeena ugu muhiimsan waa inaan Netkiosk ka dhigno sida ugu macquulsan, iyo Kiosk Software oo la awoodi karo iyada oo loo marayo horumarin joogto ah iyo casriyeyn cusub. Nidaamyada macaamilka ee macaamiisha ah ayaa ka caawiyay Netkiosk inuu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu caansan oo lagu kalsoon yahay ee software-ka ee ku saabsan adduunka. Talooyinka macaamiisha qiimaha leh waxay noo ogolaanayaan inaan sii wadno Netkiosk hadda oo la isku halleyn karo, waxaanuna hubiyaa in Netkiosk uu ka shaqayn doono degaan kasta oo suurtagal ah. Nidaamkayaga gaarka ah ee khaaska ah wuxuu siinayaa macaamiisha xorriyadda iyo dabacsanaanta si ay u waydiisato isbedel ama qaababka dheeraadka ah iyadoo ku xiran baahidooda iyo shuruudaheeda Waxaan rajeyneynaa inay taasi abuurayso xal kasta oo guuleysi leh qof walba
Qeybta Caawinta Netkiosk
Xuquuqda daabacaadda software Netkiosk kiosk software
Taageero Netkiosk , 2019 Barnaamijka Netkiosk Kiosk Software